Namoota Bilisummaa Oromoo barbadan hundaaf. !!!
Oromoo rakko keessa ba'uuf Mari’achuun kara tokko irra adeemuu qabna.
Haalii keessa jiru gadisisa fi yaadeesadha. Diini keenya yeeroo cimmaa jiruu kanati Oromoon amoo laffacha adeemun diina tumsudha. Ijjooleen Oromoo kayyoo isaanti cimmani haga dhummati dhabachuu kan dadhabaa jiraanf Wayee Oromummaa fi Bilisummaa hubannnoon isaani cimma akka hin tane mulisa. Ijoolee Oromoo Qbsoo keessa turan heedu dha isaan keessa dhaabba Habasha hunda keessa galuun warii seena isaan baleessan fi Oromoo xiqeesan jiru. Kan amoo akka Ibsa Gutama, Abiyuu Galata kkf Kayyoo ganama egalan hanga harati utuu hin jijirin warii duka jiran jiru, sababin isaa Wayee Oromummaa fi Bilisummaa hubannoo Cimma qabachuu isaanti.
Uumata Oromoo Bilisa basuu yoo barbanee dura of bilisummaa basuu qabna. Of bilisoomsuun amoo Oromummaa Qama keenya goodhachudha. Amanta Faranjii fi Amanta Arba leelisuu irra of bilisumsuu, Habasha diina keenya yeero hunda ta'uu isaan damaqani beekuu, ganduma irra of bilisoomsun QBO kayyoo dhuga wagaa 40 itti lubu waregene fi feedhi fi hawwii saba Oromoo Bilisumaaf yoo murtefanee qoofadha. Namoon Dhaaba siyyasaa akka hucuu jijirtan fi amanta leelisan namoota yeero hunda ijjnnoo hin qabne fi dhumma irrati gantuu fi ergamtuu diina ta'uu. Mee Bartota 60 kessan wara QBO oromo irrati hirmatan seena isaan qooradha. Waari Oromummaa qama goodhachuu dadhaban yeeroo hunda dhaabba jijiratuu, Habasha jala adeemuu, Habasha waliin waqeefatuu, Mazigida Habashati salatuu achii dhufan amoo wayee Oromoo adeesuu, Dhiga Yeesusuun tokko taneera jeedhan Tigire waliin Jilbeenfatuu, Obboleen Musilima jeedhan Gurage dubsan Oromoo dhigga isaan amoo huduu qaba jeedhan harka qabuu lagatuu.
Balaan Qaroo ijoolee Oromoo Baroo Tumsa fi Dr. Haile Fida faa dhabba “Meison Fi Echat “ jeedhamu jalati akka gargari qoodaman goodhe adda adduma Europa keessati Dhalatee dhani, OPDO hara Oromoo rakkiftu kun akka wayyanen dhabatuu yaadi isaa kan burqeee erga Dr. Negason ABO irra bayee TPLF waliin qunamti erga ergaleeti. Balana bara 2008 ABO fi WBO gagayee kan madee Kora ABO America irra dhalatee, 2015 Diasporan TPLF jala hirire biyyati galee kana qabsoof bala hin qabu jeedhan yaadun siiri miti. Lafa karemetri 250 fi Ticketa Xiyyara 40% rakkasha argachuuf jeecha diasporan Embassy TPLF jala kan hiriruu dandayee Oromummaa isaa QBO gegesa jira irrati hubannoo cimmaa akka hin qabne muliisa kun siirti irrati mariatamuu qaba.
Dhaabbileen Oromoo rakko jiru tufachuu, rakkoon jiru furmataa barbaduuf yaada dhiyatuu tufatan caalisun nu midha jira, Leelisuman Amanta, Gantuman Diaspora fi Ganduma qabsoo keenya midha waan jiruuf irrati duluu qabna wamicha jeedhu dhiyeesne jira, haqa bakee jiru kana califne ilaalun badii dha.
Nami Lammi isaa Bilsisoomsuuf wareegama lubu kafaluuf deemu dura waan kana irra of bilisomsuu qaba. Embbasy Ethiopia keessati shubisa bulan Haawwasa Oromoo ijara jeechun of sobuu ta'aa.
Utuu kana wal barsisfne wal amane Orumummaaf dursa hin latiin diiree qabsoo waliin deemun bala isaati bu'aa isaa irra caalaa.
Rakkoo kun utuu jiru akka hin jiree goochuu of sobu dha, rakkoo kana utuu beeknuuu dubachuu sodachuun caalisun amoo QBO oromoo akka diigamuu fi Mornan diina keenya akka cimuu fi gabatuu goochuu dha. Kanaafu haqa jiruu irrati Marianee gara irrati walii galee irrati lucoofnee QBO shafsisuu qabna. Dhaabaa hin jiree maqa lachuun arara jeechuun qabsoo burjajeesuu irra warii kayyoo ABO ganama qoophese fi BIlisummaa Oromoo irrati wal galuu qabsoo qoofa irrati xiyyefachuu qabna.
Dhaabbileen Oromoo, Hayuuleen Oromoo, Medialee fi Artistoon Oromoo Balaa Uumata Oromoo marsee jiru dura dhabachuuf dulaa waloo tokko gegesuu qabna !!!
Dulii Gegesinu Fara Bilisumaa Oromoo kan ta'aan ilaalchoota kana gadii irrati:-
1. Oromummaa dhisaan Amantaa Leelisuu;
2. Oromummaa dhissan Habashuma jala hiriru fkn Goocha Diaspora barana;
3. Oromummaa itti mana ba'aanfi dhisa Gandummaa jala adeemu;
4. Dargagago Oromoo ilaalcha waraqa qabachuun akka dargagoota 60 keessa cimmisuu ykn jajabeesuu
Kana kan caalisuu yoo jirate egeree Oromoof kan hin yaanee qofa
Dhimmaa kana irrati QBO bilisumma Oromoo fi warii Bilisummaa Oromoo barbadan Marii Media Oromoo irrati Gegesuuf mariachaa jiru, Marii kun Media Oromoo TV fi Redio Oromoon akka uumataaf darbuu ta'aa. TV SBO, TV Toronto, TV. Minisota fi OMN akkasumasii Redion fi Websiten Oromoo Gazeexesitoon Oromoo kan Irrati Argaman yamuu ta'uu Mangudoon QBO irra turan fi jiran warii Akka Abiyuu Galata, Ibsa Gutama, Galasa Dilbo, Ahimad Hussen, Mulugeta Mosisa, Abara Waqijira, Dr. Tadase Eba kkf akka saganta kana irrati hirmatantu yaadama. Saganta kana Prof. Asafa Jalata,Prof. Mohammad Hassan, Prof. Mekuria Bulcha akka gegesan fi Oromoon Orummumaa jala akka hiriruu ni barsisuu jeenee abdana. Galliin Marii kana QBO hundi Amanta leelisuu fi Ganduman deemuu irra of Bilisoomsun Oromummaa jalati hirirudha QBO tokkoman Jaluma fi Amala waraqa masakamudha. QBO lubun Meeqaa itti wareegamee akka harka diinati hin kufnee goochuuf.
Qindeesitoona, Gegesitoota fi gorsitoota Marii Oromoo:
Dhimma kana irrati dursine TV fi Redion isiin waliin marii goona: ergasi booda: Dhimma kana Mediale Oromootu Qoophesaa: Median Oromoo hundi wal tatan qoophesitu Gummin Paarlamaa Oromoo yaada framework qoofa qoophesu fi marii kun maliif akka barbachisee fi bu'aan isaaf yaada murte xumura isiin waliin qoophes uumatati dhiyeesudha.
Caasaa gartuu Formi Marii Oromoo kana ijaramuun maliif barbachisee?
Gartuun Media Oromoo dhimma kana irrati dura dursoo ta’aan akka hubatan, qoophesan, gegesan fi uumata birran ga’aan kan filatamanf nami Media rakko kana yoo hubatee hoji isaa fula dura keessati dhaabbatan irrati waan nu gargaruu;
1. Media Ummata tokko wal duka luceesuuf gumacha Olana waan qabuuf. Namoota Caqasaman ilee barbadan nu qunamuuf caaraa fi qunammiti waan qabaniif.
2. Gartuun Hayuulee Oromoo kun kan Filatamanf namoota dhimma kana irrati muxannno qaban fi marii kana akka kara irra hin jalanee wara qajeelchuu fi siireesuu danda’aan wara Oromoo abdi gudaa irrati qabuu waan ta’aanfi.
3. Gartuun Gorsistoota Hayyulee fi Abboti Qabsoo keessa turan kun maliif barbachisee yoo jeetan? Bara rakkina sun Teesumi lafa utuu isaan hin dandeesin, Amanta fi Gandan utuu wal hin qoodin, Angoo fi Ololi Habasha utuu isaan hin haawwatiin waan hunda dura Bilisummaa Oromoo dursa keenan QBO asiin isaan ga’aan ama bara haali mijatee kana keessa boodeti deebisuu keenya siiri akka hin tanee nu gorsuu danda’uu waan ta’eef. Bayiin Caasaa kana dabalamuu ykn hirachuu ni danda’aa, akkasumasi akkata adeemsa isaa Paltaki Cufa, kara Media TV fi Readio fi Teleconfrence dursine gegesitoon fi hirmatoon akka irrati mari’atan goona.
1. Medialee Oromoo irra
2. Warii Marikana gegeesan adeemsa kana yaada isaa luceesan:-
3. Mangudoon Nu gorsan fi tajabani amoo
4. Dargagoota Qaroo fi Soochii qabsoo fula adda adda jira ira
5. Abooti Amanta Hunda Waqeefata, Isilma fi Kirstiana Oromoo bakka bu'oota Akka irrati argaman goona.
Yaadicha hundu degera jiru, garuu Namoota kana irrati waluman irrati hojeene akka isaan hirmatan goona, nami isaanti dhiyatu hundi akka isaan dubsan goona, hundi isaa yaada kana ni degeruu garuu kara itti isaan qunamnuu yoo wal gargaree mijeesinef. Isiin wara mediatu Teessoo namatoo kana qaba ergasi Teleconfrence cufa banee sutu suta dubifna.
Kana booda wayee Qabsoo gaafa yeero arganuu hojeechuu utuu hin tanee sa"a 24 hojeechun guyya hunda qabsoo irrat argamudha. Warii yaada adda ykn yaada dabalata qabdan Tessoo kana gadiin yaada keessan nuuf erga.
Gummi Paarlamaa Oromoo/ Oromo Parliamentarians Council